Khuphuka nezakho sibone inkunzi – Maskandi Media
Khuphuka nezakho sibone inkunzi
Lona umcimbi waminyaka yonke ovame ukubanjwa njalo ngasekupheleni konyaka. Uvame ukubanjelwa enkundleni yebhola lezinyawo eThekwini enyuvesi i-Durban University of Technology. Lo mcimbi wahlelwa omunye ongumculi kaMaskandi uNgelo V.
Kusukela waqalwa, ubungakaze ungabi impumelelo, kunalokho ukhombisa okukhulu ukukhula. Lo mcimbi obanjelwa eCurries Fountain, nokuyinkundla enensizwa engumthandi kaMaskandi eyalala khona ngenxa
yodlame kuMaskandi, imumatha umthamu omkhulu wabathandi bomculo kanye nabaculi. Kwathi uma zisuka izidumo zomculo ngoba phela umculo wamashinga lona, kwabonakala kulala induna yabalandela bakaMjikijelwa ngesikhali.
“Kwaba buhlungu kakhulu lokhu esakubona kwenzeka kuleya nkundla. Siyaqhubeka futhi nokukhuza udlame kubalandeli ngoba ibona kanye abangongoma uyayona”.
“Uma kunganqobeka bona, noma kanjani umculo wethu uyosithola isithunzi esiwufanele.
Zalala izinsizwa nezintokazi ngenxa yodlame kulo mculo kubangwa into engekho nakubabikho. Yathi Indidane ifisa ukubona lo mculo usufana nebhola ngoba ebholeni kuyadlalwa kuwine abawinayo, akekho oshaya omunye”. Kubeka uNgelo V.
Nakulo nyaka kulindeleke ukuthi ubekwelinye futhi izinga ngoba ukhombisa ukukhula mnyaka yonke. Kusanda kuhlelwa ukuthi kube nomculo ozowina imali ebhekile impela ngokuba nabalandeli abaningi. Lokho kubonakala ngemibala eyaqalwa iyona njalo Indidane.
Isicoco besisalokhu sithathwe uKhuzani njalo nje uma kubhekwa ubuningi babalandeli ngoba useyinkunzi loya mfana. Kuyathokozisa ukubona imcimbi kaMaskandi ikhula ngaleli zinga.
Lokhu kuzokwenza ukuthi nalabo abasawubukela phansi bazoqala bawuhloniphe. Sisalindele ukuzwa kumfoka Vilane odume ngelika Ngelo V ukuthi zithini izinhlelo zakulo nyaka njengoba enyamalele nje naye estudio, sekunesikhathi egcinile ukubonakala ekhipha icwecwe.
Previous Previous post: Annual Indidane Maskandi Festival
Next Next post: Impucuzeko Maskandi Festival